Nhazi interface ndị ọrụ: nkuzi sitere na igwe elu Indianapolis | Blog MarTech
Mgbe m na-abịa ma na-abịa nzukọ kwa ụbọchị, m nọ n’elu igwe mbugo nwere nke a njirimara interface interface:
Ana m eche akụkọ ihe mere eme nke igwe mbugo a na-aga ihe dị ka nke a:
Emere igwe mbuli elu ma nyefee ya n'ụzọ kwụ ọtọ, dị mfe iji ọrụ dị ka nke a:
Ihe ọhụrụ a chọrọ bụ: “Anyị kwesịrị ịkwado ndị ìsì!”
Kama ịhazigharị njirimara onye ọrụ nke ọma, ọzọ imewe bụ naanị n'ime ọnụọgụ mbụ.
Chọrọ zutere. Edozi nsogbu. Ma ọ bụ?
Enwere m ihu ọma nke ikiri mmadụ abụọ ọzọ na-arịgo na mbugo wee gbalịa ịhọrọ ala ha. Otu na-agbanye “bọtịnụ” mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì (ikekwe n’ihi na ọ buru ibu ma nwee ọdịiche dị ukwuu na ndabere ahụ — amaghị m) tupu amata na ọ bụghị bọtịnụ ma ọlị. Obere ihe (m na-ele anya), ọ pịa bọtịnụ ahụ n'ezie na nke abụọ ya. Onye ọzọ nke rutere n'elu ụlọ ọzọ kwụsịrị mkpịsị aka ya n'etiti traject iji nyochaa nhọrọ ya. O kwenyere n'ụzọ ziri ezi, mana ọ bụghị n'echeghị echiche.
Ọ dị m ka ya bụrụ na m ga-ahụrịrị onye nwere nsogbu anya na-anwa iji igwe mbuli a. Ka emechara, a braille atụmatụ a kwukwara kpọmkwem maka ha. Ma olee otu braille na bọtịnụ nke na-abụghị ọbụna bọtịnụ ga-ekwe ka onye isi nwere ike ịhọrọ ala ha? Nke ahụ abụghị nanị na ọ gaghị enye aka; nke ahụ pụtara. Njirimara onye ọrụ a emezigharị ọ bụghị naanị ịjụ mkpa nke ndị nwere ntụpọ anya, mana o mekwara ka ahụmịhe onye ọrụ ahụ gbagwoju anya maka ndị ọrụ anya.
Aghọtara m na e nwere ụdị ego na ihe mgbochi dị iche iche iji gbanwee usoro anụ ahụ dịka bọtịnụ nke igwe mbuli. Agbanyeghị, anyị enweghị otu ihe mgbochi ahụ na weebụsaịtị anyị, ngwa weebụ, yana ngwa ekwentị. Yabụ tupu ịgbakwunye atụmatụ ọhụrụ ahụ dị mma, gbaa mbọ hụ na ị na-etinye ya n'ọrụ n'ụzọ na-egbo mkpa ọhụrụ ma ọ bụghị ịmepụta nsogbu ọhụrụ. Dị ka mgbe niile, onye ọrụ nwale ya iji jide n'aka!
Mee 10, 2011 na 11: 06 AM
Akwụkwọ edemede John. Kwụ ọtọ, na-atọ ọchị ma ruo n'isi.
Mee 11, 2011 na 2: 01 PM
Ee nke ahụ bụ ihe jọgburu onwe ya bọtịnụ button na-echetara m nhoputa ntuli aka ndị isi nke South Florida na 2000 http://bit.ly/mJCER7
Mee 12, 2011 na 12: 10 PM
yep, na okirikiri nhọrọ ukwuu bụ otu n'ime m niile oge mmasị ikpe ọmụmụ na ogbenye UI 🙂
Jun 14, 2016 na 5:48 AM
Ọdịdị mara mma, ọmarịcha ọkwa, onye nhazi ahụ maara nke ọma ma dị mma